မအေကို ဓားနဲ့ထောက် ပိုက်ဆံအိတ်လုတော့ သူ့အမေကို ဓားနဲ့ထိုးတယ်ထင်ပြီး 15 နှစ်အရွယ်ကလေးက ဝင်ကာကွယ်တာကို ရက်ရက်စက်စက် ဓားနဲ့ See More – Messi Club
မအေကို ဓားနဲ့ထောက် ပိုက်ဆံအိတ်လုတော့ သူ့အမေကို ဓားနဲ့ထိုးတယ်ထင်ပြီး 15 နှစ်အရွယ်ကလေးက ဝင်ကာကွယ်တာကို ရက်ရက်စက်စက် ဓားနဲ့ See More
ကလေးရဲ့ အမေ ရေးခဲ့တဲ့ စာလေး ဖတျရငျး ရငျထဲမှာ မကောငျးဖွဈမိတယျ ဒီ ကလေးအရှယျက မငျးတို့ကို ဘယျလောကျ ဒုက်ခပေးနိုငျမှာမို့ အဲ့လောကျ ရကျရကျစကျစကျ လုပျခဲ့ရတာလဲကှာ
သူ့မိခငျကို ဓားနဲ့ထောကျ ပိုကျဆံအိတျလုတော့ သူ့အမကေို ဓါးနဲ့ထိုးတယျထငျပွီး အသကျ ၁၅နှဈသာရှိသေးတဲ့ ငါ့သားလေးက သူ့လကျကလေးနဲ့ ရှိတဲ့ခှနျအားလေးနဲ့ကာကှယျမိတာကို ရကျရကျစကျစကျ ဓားနဲ့အခကျြပေါငျးမြားစှာခုတျပွီး ဓားနဲ့ထိုးသတျခဲ့တဲ့နငျတို့တှေ
ငါ့သားလေးကိုရကျရကျစကျစကျသတျခဲ့သလိုမြိုး ပွနျအသတျမခံရပါစနေဲ့… ငါတို့မိသားစုရဲ့ ပြျောရှငျစရာမိသားစုကမ်ဘာလေး အသိုကျအမွုံလေးပွိုကပြကျြစီးခဲ့ရသလိုမြိုး
နငျတို့မိသားစုဘဝတှပွေိုကပြကျြစီးခွငျးမြိုး မကွုံရပါစနေဲ့ သူ့မိခငျရှမှေ့ာ သူ့သားလေးကိုရကျရကျစကျစကျ သတျခဲ့သလိုမြိုး နငျတို့မှေးထားတဲ့ မှေးလာမဲ့ နငျတို့ သားသမီးကို နငျတို့ရှမှေ့ာတငျ ရကျရကျစကျစကျ အသတျခံရတာမြိုး မကွုံရပါစနေဲ့
သူတပါး ကွိုးစားရှာဖှစေုဆောငျးထားတဲ့ ဥစ်စာပစ်စညျးကို ခိုးဆိုး လုယကျ ဓားပွတိုကျမှ သုံးရ စားရတဲ့နငျတို့ ဘဝတှေ နငျတို့သားသမီးအရှမှေ့ာ နငျတို့သမိုငျးကွောငျး
တဈလြှောကျမှာ လိပျပွာလုံစှာနနေိုငျပါစေ သူတပါးမိသားစုတှေ သောကပရိဒဝေမီးတှလေောငျမွိုကျပွီး မကျြရညျပေါကျကွီးငယျကရြသလို နငျတို့ နငျတို့မိသားစုတှေ မလောငျမွိုကျပါစနေဲ့ မကျြရညျပေါကျကွီးငယျမကရြပါစနေဲ့
ငါတို့မိသားစုရဲ့ အညှနျ့အဖူး သားကောငျး သားမွတျ အညှနျ့တဈလူလူတကျနတေဲ့ ငါတို့မိသားစုရဲ့အဖိုး အနဂ်ဂထိုကျတနျတဲ့ သားရတနာ သားလိမ်မာ ငါ့ကလေးကို
ရကျရကျစကျစကျသတျခဲ့ရလို့ပြျောရှငျ ဝမျးမွောကျကွပါစေ… ငါသမေတတျ နာကငျြခံစားရသလိုမြိုး ငါရူးမတတျ သှေးပကျြခဲ့ရသလိုမြိုး နငျတို့မိသားစုတှေ တနျပွနျ
မခံစားရပါစနေဲ့..တူသောအကြိုးမပေးပါစနေဲ့.. သကွားသာသနာခေါတျမို့ ကံဝဋျကွှေးဟာ ခကျြခငျြး အကြိုးသကျရောကျမယျလို့ ငါမတှေးပါဘူးး
ဒါပမေယျ့ တဈဆယူရငျ ဆယျဆမကပွနျပေးဆပျရမယျ ဆိုတာ ဘုရားဟောအရရော လောကဝတျအရရော ပွဌာနျးထားပွီးသားမို့ ကံ ကံ၏အကြိုးကိုနငျတို့လကျခံ
ယူနိုငျဖို့ ပွငျဆငျထား…ဝဋျဆိုတာနငျတို့ပွုခဲ့တဲ့အတိုငျး နငျတို့နောကျကိုထပျခပျြမကှာလိုကျလာမှာ အကုသိုလျကံ အကြိုးပေးတှကေ…. နငျတို့လိုလူတှကေို ငါလုံးဝကြိနျစာမတိုကျဘူး
လုံးဝကြိနျစာတိုကျမှာ မဟုတျဘူး မတ်ေတာပဲ နစေ့ဥျရကျဆကျ စက်ကနျ့မလပျပို့ပေးနတော ငါ့သားလေးက ဘာအကုသိုလျတဈခုမှ မလုပျခဲ့ မရှိခဲ့လို့ သိပျကိုရိုးသားဖွူစငျ
အပွဈကငျးစငျခဲ့လို့ မိဘအပျေါ ဆှမြေိုးအသိုငျးအဝိုငျးအပျေါ လူတကာအပျေါ တိရိစ်ဆာနျလေးတှအေပျေါ သိပျကို ခဈြခငျတှယျတာ ဂရုဏာကွီးမားခဲ့သူမို့ ကောငျးမွတျသောဘုံဘဝမှာ စံစားနပွေီဆိုတာ မမေေ အတိအကပြွောနိုငျတယျ…သားးး
ဘယျဗဒေငျ ဘယျနတျလခြှေနျမှ မမေေ မမေးဘူး တတျအပျသိတယျ မမေပွေောနိုငျတယျ မိခငျကိုအသကျရငျးနဲ့ကာကှယျခဲ့တဲ့သားလိမ်မာမို့.. ပွုသူအသဈ
ဖွဈသူအဟောငျးမို့ ကံဝဋျကွှေးအဖို့ပါလာတယျဆိုရငျလညျး ဤကံဝဋျကွှေးကို အပွီးဆပျခဲ့ပွီမို့ နောငျသံသရာဘဝဆကျတိုငျးမှာ အသကျရှညျကနျြးမာ ပြျောရှငျစှာနဲ့
သာသနာပွုနိုငျတဲ့ ထူးမွတျလှတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျထူး ပုဂ်ဂိုလျမွတျကွီးဖွဈပါစလေို့ အသကျရှငျနသေမြှကာလတဈလြှောကျလုံးဆုတောငျး မတ်ေတာပို့ပေးနတေယျဆိုတာရယျ တတျအားသ၍
သားလေးအတှကျ တဈရကျမှမပကျြကှကျပဲလှူတနျး ခွငျးတှပွေုပေးနတေယျဆိုတာ သား သိမယျ မွငျမယျ ကွားမယျ ရရှိစံစားနိုငျမယျဆိုတာ မမေအေကွှငျးမဲ့ ယုံတယျ သားး မမေအေကွှငျးမဲ့ယုံတယျ
ကလေးရဲ့ အမေ ရေးခဲ့တဲ့ စာလေး ဖတ်ရင်း ရင်ထဲမှာ မကောင်းဖြစ်မိတယ် ဒီ ကလေးအရွယ်က မင်းတို့ကို ဘယ်လောက် ဒုက္ခပေးနိုင်မှာမို့ အဲ့လောက် ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ခဲ့ရတာလဲကွာ
သူ့မိခင်ကို ဓားနဲ့ထောက် ပိုက်ဆံအိတ်လုတော့ သူ့အမေကို ဓါးနဲ့ထိုးတယ်ထင်ပြီး အသက် ၁၅နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ငါ့သားလေးက သူ့လက်ကလေးနဲ့ ရှိတဲ့ခွန်အားလေးနဲ့ကာကွယ်မိတာကို ရက်ရက်စက်စက် ဓားနဲ့အချက်ပေါင်းများစွာခုတ်ပြီး ဓားနဲ့ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့နင်တို့တွေ
ငါ့သားလေးကိုရက်ရက်စက်စက်သတ်ခဲ့သလိုမျိုး ပြန်အသတ်မခံရပါစေနဲ့… ငါတို့မိသားစုရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုကမ္ဘာလေး အသိုက်အမြုံလေးပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရသလိုမျိုး
နင်တို့မိသားစုဘဝတွေပြိုကျပျက်စီးခြင်းမျိုး မကြုံရပါစေနဲ့ သူ့မိခင်ရှေ့မှာ သူ့သားလေးကိုရက်ရက်စက်စက် သတ်ခဲ့သလိုမျိုး နင်တို့မွေးထားတဲ့ မွေးလာမဲ့ နင်တို့ သားသမီးကို နင်တို့ရှေ့မှာတင် ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရတာမျိုး မကြုံရပါစေနဲ့
သူတပါး ကြိုးစားရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ ဥစ္စာပစ္စည်းကို ခိုးဆိုး လုယက် ဓားပြတိုက်မှ သုံးရ စားရတဲ့နင်တို့ ဘဝတွေ နင်တို့သားသမီးအရှေ့မှာ နင်တို့သမိုင်းကြောင်း
တစ်လျှောက်မှာ လိပ်ပြာလုံစွာနေနိုင်ပါစေ သူတပါးမိသားစုတွေ သောကပရိဒေဝမီးတွေလောင်မြိုက်ပြီး မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျရသလို နင်တို့ နင်တို့မိသားစုတွေ မလောင်မြိုက်ပါစေနဲ့ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်မကျရပါစေနဲ့
ငါတို့မိသားစုရဲ့ အညွန့်အဖူး သားကောင်း သားမြတ် အညွန့်တစ်လူလူတက်နေတဲ့ ငါတို့မိသားစုရဲ့အဖိုး အနဂ္ဂထိုက်တန်တဲ့ သားရတနာ သားလိမ္မာ ငါ့ကလေးကို
ရက်ရက်စက်စက်သတ်ခဲ့ရလို့ပျော်ရွှင် ဝမ်းမြောက်ကြပါစေ… ငါသေမတတ် နာကျင်ခံစားရသလိုမျိုး ငါရူးမတတ် သွေးပျက်ခဲ့ရသလိုမျိုး နင်တို့မိသားစုတွေ တန်ပြန်
မခံစားရပါစေနဲ့..တူသောအကျိုးမပေးပါစေနဲ့.. သကြားသာသနာခေါတ်မို့ ကံဝဋ်ကြွေးဟာ ချက်ချင်း အကျိုးသက်ရောက်မယ်လို့ ငါမတွေးပါဘူးး
ဒါပေမယ့် တစ်ဆယူရင် ဆယ်ဆမကပြန်ပေးဆပ်ရမယ် ဆိုတာ ဘုရားဟောအရရော လောကဝတ်အရရော ပြဌာန်းထားပြီးသားမို့ ကံ ကံ၏အကျိုးကိုနင်တို့လက်ခံ
ယူနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထား…ဝဋ်ဆိုတာနင်တို့ပြုခဲ့တဲ့အတိုင်း နင်တို့နောက်ကိုထပ်ချပ်မကွာလိုက်လာမှာ အကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးတွေက…. နင်တို့လိုလူတွေကို ငါလုံးဝကျိန်စာမတိုက်ဘူး
လုံးဝကျိန်စာတိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး မေတ္တာပဲ နေ့စဉ်ရက်ဆက် စက္ကန့်မလပ်ပို့ပေးနေတာ ငါ့သားလေးက ဘာအကုသိုလ်တစ်ခုမှ မလုပ်ခဲ့ မရှိခဲ့လို့ သိပ်ကိုရိုးသားဖြူစင်
အပြစ်ကင်းစင်ခဲ့လို့ မိဘအပေါ် ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် လူတကာအပေါ် တိရိစ္ဆာန်လေးတွေအပေါ် သိပ်ကို ချစ်ခင်တွယ်တာ ဂရုဏာကြီးမားခဲ့သူမို့ ကောင်းမြတ်သောဘုံဘဝမှာ စံစားနေပြီဆိုတာ မေမေ အတိအကျပြောနိုင်တယ်…သားးး
ဘယ်ဗေဒင် ဘယ်နတ်လေချွန်မှ မေမေ မမေးဘူး တတ်အပ်သိတယ် မေမေပြောနိုင်တယ် မိခင်ကိုအသက်ရင်းနဲ့ကာကွယ်ခဲ့တဲ့သားလိမ္မာမို့.. ပြုသူအသစ်
ဖြစ်သူအဟောင်းမို့ ကံဝဋ်ကြွေးအဖို့ပါလာတယ်ဆိုရင်လည်း ဤကံဝဋ်ကြွေးကို အပြီးဆပ်ခဲ့ပြီမို့ နောင်သံသရာဘဝဆက်တိုင်းမှာ အသက်ရှည်ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့
သာသနာပြုနိုင်တဲ့ ထူးမြတ်လှတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ အသက်ရှင်နေသမျှကာလတစ်လျှောက်လုံးဆုတောင်း မေတ္တာပို့ပေးနေတယ်ဆိုတာရယ် တတ်အားသ၍
သားလေးအတွက် တစ်ရက်မှမပျက်ကွက်ပဲလှူတန်း ခြင်းတွေပြုပေးနေတယ်ဆိုတာ သား သိမယ် မြင်မယ် ကြားမယ် ရရှိစံစားနိုင်မယ်ဆိုတာ မေမေအကြွင်းမဲ့ ယုံတယ် သားး မေမေအကြွင်းမဲ့ယုံတယ်